Uyini Umehluko Phakathi Kwe-CBD Amafutha Namafutha E-Spectrum Egcwele E-CBD? - Isitolo esiku-inthanethi se-CBD
Uyini Umehluko Phakathi Kwe-CBD Amafutha Namafutha E-Spectrum Egcwele E-CBD?
Imikhiqizo kawoyela ephelele ye-Spectrum CBD ikhula ngokushesha ekuthandeni izinzuzo zezempilo ezibandakanya ukukhululeka ezindabeni zokulala, ubuhlungu, ukuvuvukala nokukhathazeka. Ungahle ujwayelane nokunye kwalokhu kusetshenziswa, kepha kunezinhlobo ezimbili ezihlukile zemikhiqizo ye-CBD ku- Imakethe ye-CBD. Funda konke odinga ukukwazi ngokuhlukaniswa kwe-CBD vs. uwoyela ogcwele we-CBD, kufaka phakathi amandla wokusebenzisa ngakunye, okunconyiwe nokuthi unganquma kanjani phakathi kwalokhu okubili.
YINI I-CBD EPHELELE YESIPHEPHA?
Lesi sitshalo se-hemp noma se-cannabis siyikhaya lamakhulu ama-phytochemicals, afaka phakathi ama-cannabinoid anjenge, terpenes namanye ama-makeups amakhemikhali. I-spectrum ephelele ye-CBD Oil ibhekisa emikhiqizweni equkethe okungaphezulu nje kwenhlanganisela ye-CBD, njengamanye ama-molecule ezitshalo afana nama-fatty acids, i-THC kanye ne-terpenes zihlala zingaguquki. Uwoyela ogcwele we-CBD ovame ukubizwa ngokuthi "uhla lwesitshalo sonke" ngoba ukwenziwa kwamakhemikhali okuphelele kwesitshalo kufakiwe.
IYINI i-CBD ehlukanisiwe?
Ukuhlukaniswa kwe-CBD kuvame ukubizwa ngokuthi "i-CBD emsulwa" noma ngamaphesenti angama-99 kuya kwayi-100 e-CBD. Njengoba kungenzeka ubucabanga ngegama, le mikhiqizo icwengisiswe ukuhlukanisa kuphela i-CBD compound engenawo ama-terpenes angeziwe noma ama-cannabinoids. Amandla ayo e-CBD ngokuvamile aphezulu kunobubanzi obugcwele, okusho ukuthi umthamo omncane uvame ukunconywa.
UKUSETSHENZISWA KWE-SPECTRUM FULL CBD OIL VS CBD ISOLATE
I-spectrum ephelele ye-CBD Oyili ivame ukuncanyelwa ukufaka ukuhlukaniswa kwe-CBD ngoba ucwaningo lukhombisa ukuthi ama-terpenes nama-cannabinoids avela emvelweni ndawonye futhi uma ehlangene ahlangana ngezindlela ezilusizo. Lokhu kusebenzisana kubizwa ngokuthi yi-entourage effect futhi kukholelwa ukuthi kunika i-CBD ukufinyelela okubanzi kuze kufike ezinzuzweni zezempilo.
Ucwaningo olulodwa olwenziwe ngu-Ethan Russo, MD, luhlolisise izinzuzo ze-terpenes ku-CBD ephelele, ekhombisa imiphumela ethembisayo yezimo ezahlukahlukene. Isibonelo, inhlanganisela ye-terpenes caryophyllene pinene ne-myrcene futhi isiza ukudambisa ukukhathazeka, ngenkathi ukuhlanganisa i-terpenes limonene ne-cannabigerol (i-cannabinoid eyaziwa kancane) kukhombisa isithembiso ekwelapheni i-MRSA. Ngisho ne-terpenes limonene futhi ihlanganiswe ne-CBD yenza ukwelashwa okunamandla kokulwa nezinduna. Lolu cwaningo lukhombisa lokho i-CBD ephelele kungokuhlangenwe nakho okugcwele komzimba.
Olunye ucwaningo lwakwa-Israyeli ngamandla we I-CBD ihlukanise kuqhathaniswa ne-CBD ephelele ye-spectrum ikhombise ukuthi i-CBD ephelele ye-spectrum ibilusizo kakhulu kuzilungiselelo zomtholampilo zezimo ezinjengokukhathazeka nokuvuvukala. I-CBD emsulwa iholele "ekuphenduleni okwenziwe ngensimbi," okusho ukuthi, lapho inani le-CBD lidlula iphuzu elithile, umthelela walo kwezokwelapha wehliswa kakhulu.
Kodwa-ke, lokhu akusho ukuthi ukuhlukaniswa kwe-CBD akukaze kuzuze. Abanye abasebenzisi abazwela kakhulu iTHC baphendukela ku-CBD ukuzehlukanisa ukuze bazuze esitshalweni se-hemp ngaphandle kwemiphumela emibi ye-THC. Futhi labo abakhathazekile ngokuhlolwa ukuthi bane-THC bathanda ukuhlukaniswa kwe-CBD. Ngaphezu kwalokho, i-CBD iyazihlukanisa futhi ivumela abasebenzisi ukuthi barekhode ukuthi bathola malini le-CBD kumthamo ngamunye.
INGABE i-CBD ihlukanisiwe noma i-SPECTRUM EPHELELE I-CBD INGCONO?
Ukuthi ukhetha yini Amafutha e-Spectrum egcwele e-CBD noma ukuhlukaniswa kwe-CBD, cishe uzothola izinzuzo zezempilo zesitshalo se-cannabis. Ngezifundo eziningi ezivelayo, abacwaningi bafunda okuningi nsuku zonke ngomehluko phakathi kwezinhlobo ezimbili zemikhiqizo ye-CBD. Ngaphezu kwalokho, kulabo abahlala ezifundeni lapho i-CBD ephelele ingatholakali khona, i-CBD emsulwa ivame ukuletha isisombululo esisemthethweni nesikahle. Phela, ngisho ne-CBD encane inenzuzo kunanoma iyiphi i-CBD.
I-Red Emperor CBD FULL SPECTRUM CBD OIL
I-Red Emperor CBD inekhwalithi ephezulu kakhulu Amafutha e-Spectrum egcwele e-CBD kuthengiswe ku-inthanethi nokuhlolwa komuntu wesithathu kuqinisekisa ukuthi uzothola inani elifanele le-CBD.